Buhari oo ku dhawaaqay tirtiridda Boko Haram - BBC Somali
Buhari oo ku dhawaaqay tirtiridda Boko Haram
4 Juunyo 2015
Lahaanshaha sawirka State House
Image caption Maalintiisii ugu horeysay ee Shaqada waxa uu la kulmay saraakiisha ciidamada
Madaxweynaha dhowaatan la doortay ee dalka Nigeria, Maxamadu buhari ayaa sheegaya in xoogagiisa ay billaabeen dabargoynta muqaawamada Boko Haram.
Madaxweynaha cusub ee dalka Nigeria Maxamadu Buhari oo hadlay intuu ku sugnaa dalka Niger ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dalkaasi ay billaabeen dagaal iyo olole ka dhan ah Boko Haram, kaas oo lagu soo afjarayo muqaawameynta kooxda.
Madaxweyne Buhari ayaa Xilka waxaa loo dhaariyay jimcihii la soo dhaafay, wuxuuna safarkii ugu horeeyay ku tagayaa dalkalka deriska la ah dalkaasi eek a qeybgalaya dagaalka ka dhanka ah Boko Haram.
Dalalka Niger, Chad iyo Cameroon ayaa waxa ay ka qeybgalayaan dagaalka lagu doonayo in Boko haram lagu soo afjaro.
Nigeria waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii gobolada waqooyiga Bari ee dalkaasi looga sifeyn lahaa Boko Haraam.
Image caption Olole ka dhan ah Boko Haram ayey Nigeria wadaa
Dhanka kale, ciidamada dalka Nigeria waxa ay si cara leh uga jawaabeen warbixinta hay’adda Amnesty international ee ciidamada dalkaasi ku eedeysay inay masuul ka ahaayeen geerida kumannaan dhallinyaro ah oo lagu xiray xabsiyo.
Kumannaan dhallinyaro ah ayey hay’adda tilmaamtay in ay ku dhinteen xabsiyo ciuidamada ay leeyihii. warbixinta oo xustay in 7 kun oo dhallinyaro ay la dilay.
Arrintan ayaa waxa ay imaaneysaa iyadoo hay’adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ay soo saartay warbixin ay ku sheegtay in ciidamada dalkaasi ay gabood affalo geysteen.
Laakiin ciidamada dalkaasi ayaa arrintaasi si carol eh uga jawaabay.
Afhayeen u hadlay ciidamada dalkaasi, Chris Olukolade ayaa sheegay in militariga aysan weligood ku xad gudbin xuquuqda aadanaha aysan gaboodfalo geysan, wuxuuna amnesty ku eedeeyay inuu ololaha waji xumeyneyso.
Hase yeeshee, Solomon Sacco waa xubin sare oo ka tirsan hay’adda, waana qoraayaasha warbixinta, waxa uuna difaacayaa eedaha ay u jeediyeen ciidamada Nigeria.